Ndị agha nke ala Naịjirịa ewegharago Gwoza
Ndị agha nke ala Naịjirịa ekwuputego na ha ewegharago obodo Gwoza site n’aka ndị otu agha iyi egwu, Boko Haram. N’ozi ha siri na Twitter wepute n’ụtụtụ taata bụ Fraịdee, ndị agha Naịjirịa anagharago ndị Boko Haram obodo Gwoza, ebe ndị otu a jiburu mere isi ọchịchị ha n’ugwu awụsa.
Ha kwuru na ndị agha ahụ gburu ọtụtụ ndị Boko Haram, merụọ ọtụtụ ahụ, ma jide ọtụtụ na ndụ. Ọtụtụ ndị otu Boko Haram nọzị n’ọsọ ugbu a. Gwoza, bụ nke e nwere na nanị kilomita 135 na mpaghara ọwuwa anyanwụ obodo Maiduguri, bụ otu n’ime obodo ndị Boko Haram wakporo na Steeti Boronu.